CCOSS: Open Source Software Contributors Summit 2021 | Linux မှ
Linux Post Install လုပ်ပါ | 09/09/2021 06:00 | GNU / Linux များ, NOTICIAS
တစ်လအတွင်း၊ အထူးသဖြင့် အောက်တိုဘာလ ၄-၉၊ ၂၀၂၁ ဖြစ်ရပ်ဟုလူသိများသည် Open Source Software Contributors Summit (CCOSS).
La Open Source Software Contributors Summit (CCOSS) ၏ပဏာမခြေလှမ်းဖြစ်ပါတယ် ပွင့်လင်းအရင်းအမြစ်မက္ကဆီကို (OSOM). OSOM ၎င်းသည်ဝါသနာအိုးအုပ်စုဖြစ်သည် မက္ကဆီကိုမှ Open Source မတူညီသောကုမ္ပဏီများနှင့်တက္ကသိုလ်များတွင်အလုပ်လုပ်ကြသော Open Source software ကိုအသုံးပြုခြင်းကိုနှစ်သက်သည်။
ပြီးတော့ဒီ post မှာငါတို့အကြောင်းနည်းနည်းမှတ်ချက်ပေးမယ် ကျင့် Code ကို ထိုအဖြစ်အပျက်၏ဤထုတ်ဝေမှုပြီးစီးပြီးနောက်စိတ် ၀ င်စားသူများအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ယခင်ထုတ်ဝေမှုများထဲမှတစ်ခု၌ပြောသောခေါင်းစဉ်နှင့် link ကိုကျွန်ုပ်တို့ချက်ချင်းချန်ထားခဲ့ပါသည်။
"Open Source စီမံကိန်းများအတွက်ကျင့်ဝတ်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကျယ်ပြန့်သောကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအခမဲ့ဆော့ဝဲများနှင့် Open Source ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအသိုင်းအဝိုင်းများအတွင်းခေတ်နှင့်အညီလူမှုရေးနှင့်ကိုယ်ကျင့်တရားစံများနှင့် / သို့မဟုတ်တန်ဖိုးများကိုထုတ်ဖော်ပြသရန်ရှင်းလင်းပြတ်သားသောနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။ ကျင့်ဝတ်တစ်ခုအားထည့်သွင်းခြင်းသည်ဥပမာများစွာ၊ အရောင်မရှိသော၊ အခြားအပယ်ခံလူတန်းစားများကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သောမတူကွဲပြားမှုများမရှိခြင်းကိုဖြေရှင်းနိုင်သည်။" ပွင့်လင်းအရင်းအမြစ်စီမံကိန်းများအတွက်ကျင့်ဝတ်
1 CCOSS 2021: အောက်တိုဘာလ 4-9, 2021
1.1 CCOSS (Open Source Software Contributors Summit) ကဘာလဲ။
1.2 ဒီနှစ် ၂၀၂၁ ရဲ့အဖြစ်အပျက်ကငါတို့ကိုဘာတွေဖြစ်စေသလဲ။
CCOSS 2021: အောက်တိုဘာလ 4-9, 2021
CCOSS (Open Source Software Contributors Summit) ကဘာလဲ။
သင့်ရဲ့အဆိုအရ တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်ဟုပြောသည် အွန်လိုင်းဖြစ်ရပ်:
"၎င်း၏အဓိကရည်ရွယ်ချက်မှာလက်တင်အမေရိကရှိလူ ဦး ရေနှင့်အဖွဲ့အစည်းအရေအတွက်ကိုတိုးစေရန်ဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင်ပါဝင်ခြင်းသည် open source စီမံကိန်းများတွင်ပါ ၀ င်ရန်စိတ် ၀ င်စားသောမည်သူမဆိုအားဖွင့်သည်။ ထို့အပြင်၎င်းသည်ပရိုဂရမ်မပါ ၀ င်သောပရောဂျက်တစ်ခုသို့ပံ့ပိုးရန်ကွဲပြားသောနည်းလမ်းများကိုခွင့်ပြုသည်။ ဥပမာအားဖြင့်ဒီဇိုင်း၊ စာရွက်စာတမ်းများ၊ ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း၊ ညှိနှိုင်းခြင်း၊ ဖြန့်ဝေခြင်းအဆင့်အမျိုးမျိုးတွင်ကူညီခြင်း။"
ဒါ့အပြင်သူတို့ရဲ့ စီစဉ် အောက်ပါတို့ကိုမီးမောင်းထိုးပြပါ။
"သင်တန်းသားများအားလုံးသက်တောင့်သက်သာနှင့်လုံခြုံမှုခံစားရရန်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်အလွန်အရေးကြီးသည်။ ဟိ ကျင့်ဝတ်စည်းမျဥ်း ရရှိနိုင်ပါသည် ဒီမှာမရ။ CCOSS သင်တန်းသားများ၊ စပီကာများနှင့်စပွန်ဆာအားလုံးလိုက်နာသင့်သည်။ ပွဲမစခင်ဒါမှမဟုတ်နောက်မှာတစ်ယောက်ယောက်ကအဲဒါကိုချိုးဖောက်နေတယ်ဒါမှမဟုတ်မင်းကိုအနှောင့်အယှက်ပေးတယ်လို့မင်းယူဆတယ်ဆိုရင်စည်းရုံးရေးအဖွဲ့ကဘယ်သူ့ကိုမှဆက်သွယ်ဖို့မတွန့်ဆုတ်ပါနဲ့။
SG Software ဂုရုကြီး ကျားမ၊ လိင်စိတ်ခံယူမှု၊ မသန်စွမ်းမှု၊ အသက်၊ ရုပ်ရည်သွင်ပြင်၊ ခန္ဓာကိုယ်အရွယ်အစား၊ ကျွန်ုပ်တို့၏လက်ထောက်များအပေါ်မည်သည့်နှောင့်ယှက်မှုမျိုးကိုမှကျွန်ုပ်တို့သည်းမခံပါ။ စကားပြောခြင်းအပါအ ၀ င်မည်သည့်ဆက်တင်အတွက်မဆိုသင့်လျော်သောလိင်ဘာသာစကားသို့မဟုတ်ရုပ်ပုံများ စည်းကမ်းဖောက်ဖျက်သူများအားပွဲစီစဉ်သူ၏ဆုံးဖြတ်ချက်အရငွေပြန်အမ်းခြင်းမရှိဘဲပွဲမှထုတ်ပယ်ခြင်းခံရနိုင်သည်။"
ဒီနှစ် ၂၀၂၁ ရဲ့အဖြစ်အပျက်ကငါတို့ကိုဘာတွေဖြစ်စေသလဲ။
သင်တန်းသား ၁၅၀၀ ကျော်ရှိသည်။
လှုပ်ရှားမှု ၆ ရက်။
ဆွေးနွေးပွဲနှင့်အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ ၃၀ ကျော်ရှိသည်။
ထို့အပြင်ခုနှစ်, ဒီ ဒုတိယထုတ်ဝေ de la Open Source Software Contributors Summit Open Source စီမံကိန်းများအားမည်သို့ပံ့ပိုးရန်မည်သို့လမ်းညွှန်ရန်ရည်ရွယ်ချက်နှင့်ဆက်လက်လုပ်ဆောင်သည်။ သူတို့အတွက်သူတို့၏ဆွေးနွေးပွဲများနှင့်အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။
ဆွေးနွေးပွဲ (၂၅ မိနစ်)ဆွေးနွေးပွဲများသည် Open Source စီမံကိန်းများအားဖန်တီးရန်သို့မဟုတ်ပံ့ပိုးရန်အတွေ့အကြုံများနှင့်အကြံပြုချက်များကိုအဓိကထားဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။ ဖြေရှင်းရမည့်အကြောင်းအရာဥပမာများ၊ စီးပွားရေးအရရေရှည်တည်တံ့အောင်မည်သို့လုပ်နည်း၊ လိုင်စင်ကိုမည်သို့ရွေးချယ်ရမည်၊ အသိုင်းအဝိုင်းနှင့်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှု၊ ပံ့ပိုးရန်ယေဘုယျအကြံပြုချက်များ
ပံ့ပိုးကူညီမှုအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ (၃ နာရီ)အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ၏ရည်ရွယ်ချက်သည်သင်တန်းသားများအား၎င်းတို့အားတိကျသောစီမံကိန်းတစ်ခုတွင်ပါဝင်ကူညီနိုင်ရန်အစပျိုးရန်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ကုဒ်နှင့်စာရွက်စာတမ်းများသိုလှောင်ရုံများကိုမည်သို့ရယူရမည့်နည်းလမ်းများ၊ အပြောင်းအလဲများပြုလုပ်ရန်လုပ်ထုံးလုပ်နည်း၊ ပြန်လည်ပြင်ဆင်ရေးလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကိုပြသလိမ့်မည်။
တိုတောင်းခုနှစ်, "CCOSS ၂၀၂၁" ဒီနှစ်ကငါတို့အတွက်ကြီးကျယ်ခမ်းနားတဲ့အရာတွေပေးတယ် ဒုတိယထုတ်ဝေ၎င်းသည်အသီးအနှံများကိုများစွာကျေးဇူးပြုလိမ့်မည်မှာသေချာသည် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအခမဲ့ Software နှင့် Open Source Communityမရ။ ဒါကြောင့်ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုသွားကြည့်ဖို့၊ သူ့ရဲ့သတင်းတွေကိုနောက်ဆုံးပေါ်တင်ဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။ သင်ပါဝင်လိုလျှင်အောက်ပါတို့ကိုလုပ်ဆောင်နိုင်သည် link ကို.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » GNU / Linux များ » CCOSS: Open Source Software Contributors Summit 2021
Firefox 92 သည်လူတိုင်းအတွက် AVIF နှင့် WebRender အထောက်အပံ့တို့ပါ ၀ င်သည်
Linus Torvalds သည် Paragon Software ကိုဝေဖန်ပြီး GitHub ၏လုပ်ငန်းစဉ်၌မလိုအပ်သောပေါင်းစည်းမှုကိုဖန်တီးသည်